Ovao ny vidinao amin'ny tranokala famandrihana mivantana amin'ny Promotions an'i Zeevou
Amin'ny teboka sasantsasany amin'ny fampandehanana ny orinasanao PMS dia mila manodinkodina ny vidinao ianao. Miankina amin'ny toe-javatra sy paikady isan-karazany, ny fananana ampiroboroboanao amin'ny OTA samihafa dia mety ary mety hanana elanelam-bidy samihafa avy amin'ny tranokalan'ny famandrihana mivantana anao. Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana, ny vidiny vaovao dia azo alamina mora foana.
Ny ankamaroan'ny mpampiantrano dia faly manapotsitra ny vidiny atolotry ny OTA sy ny lisitry ny tranokala irery tranokala famandrihana mivantana. Raha manao izany izy ireo dia afaka mizara tsara ny komisiona izay tahiriny miaraka amin'ireo vahininy. Toe-javatra mandresy io izay afaka manolotra fihenam-bidy mivantana ho an'ny vahiny.
Ny olana iray lehibe dia ny olana mikasika ny fihenan'ny vidin'ny fanananao. maro motera famandrihana Ireo mpanome tolotra dia tsy manolotra an'io fahafaha-manao fihenam-bidy io na hampihena azy ireo amin'ny fomba ezahinao ahatongavana. Ny fitambarana fampiroboroboana dia matetika miteraka olana, satria ny fomba fanisana ny fihenam-bidy amin'ny ankapobeny dia mety hanahirana.
Na dia tsy mametraka olana aza ny voalaza etsy ambony dia mety mbola hisy ny olana amin'ny paikady marketing. Mila safidy mazava sy mivantana ianao. Amin'ny tranga maro dia mety hiatrika olana ireo mpampiantrano rehefa manandrana mampiditra fampiroboroboana izay mety miteraka fifandonana amin'ny vidiny.
Ohatra; raha te hametraka fihenam-bidy amin'ny fananana iray na roa fotsiny ianao, saingy tsy hamela anao ny rafitrao. Na misy fotoana manokana hitanao fa mety amin'ny fanomezana ny mpanjifa sy ny vahiny fihenam-bidy tsara mandritra ny fotoana voafaritra. Miaraka amin'i Zeevou dia afaka mandresy mora foana ireo olana ireo ianao ary mampandeha ny fampiroboroboana ary rehefa mila ny maodelim-bidy sahaza indrindra amin'ny orinasanao ianao.
Ahoana no ahafahan'ny Promotions an'i Zeevou manampy?
Zeevou dia mahafantatra ity olana ity ary nanambola tamin'ny fampiroboroboana ny Fampiroboroboana mba hanampiana anao hahazo tombony betsaka amin'ny fotoananao, ny vola ary ny paikadinao. Izahay dia namolavola rafitra mandroso amin'ny fananganana sy fampiharana ny fampiroboroboana ireo karazana singa voafaritra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fampiroboroboana ny Zeevou's Promotions, ireo mpampiantrano dia afaka mamaritra mazava ny fotoana tokony hanaovana famandrihana sy ny daty tokony hampiharana azy ireo. Noho izany dia voavaha ny olan'ny fananana fampiroboroboana mitovy amin'ny fananana sy ny andro rehetra. Ambonin'izany, omenay ny mpampiantrano ny fahafaha-miditra tanteraka amin'ny famaritana ireo fepetra tokony harahin'ireo mpamandrika mivantana mba hampiharana ny fampiroboroboana.
Ny fampiroboroboana dia azo aseho amin'ny motera famandrihana namboarina ho an'i Zeevou afaka maimaim-poana tranokala famandrihana mivantana. Noho izany, ny vahiny dia afaka manana fidirana mora amin'ny fampiroboroboana natolotry ny mpampiantrano azy ireo ary hampiasa azy ireo hahazoana ny fihenany. Amin'ity fomba ity, ireo mpampiantrano dia afaka manana eritreritra sy fahitana mazava momba ny fizotrany ary hahazoana antoka fa mandeha tsara ireo famandrihana ireo. Ity fampiasa ity dia mampihena ny adin-tsaina amin'ny fisavoritahana mety hitranga amin'ireo vahiny rehefa mampiasa fihenam-bidy ary ahafahan'izy ireo manana traikefa amin'ny famandrihana. Ireo mpampiantrano dia afaka mivarotra ny alin'ny efitranony, na fonosana ao anatiny hametraka-ons, amin'ny sandam-bola tsaratsara kokoa noho ny vitan'ny vahiny mandalo an'izay 200+ OTA sy tranokala lisitra an'i Zeevou Channel Manager mifangaro amin'ny.
Ny fahatokisana sy ny tsy fivadihan'ny mpanjifa no fomba lehibe indrindra hiantohana ny fahombiazanao amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Ny vahininao dia te-hahazo antoka fa manana ny traikefa tsara indrindra amin'ny famandrihana fotoana fohy avelao avy amin'ny orinasanao sy tranokala famandrihana mivantana. Misy fomba maro hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifanao, fa ny iray lehibe dia ny manome toky azy ireo fa eo anilan'izy ireo izy, azon'izy ireo ny lamosiny ary omenao azy ireo ny fifanarahana tsara indrindra. Ny fanomezana fihenam-bidy ho an'ny vahiny sy ny famandrihany azy ireo hamandrika trano avy amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny vidiny ambany no dingana voalohany amin'io fomba io.
Amin'ny fampiasana ny Zeevou's Promotions, afaka manampy amin'ny fitaterana fifamoivoizana amin'ny tranokalanao ianao ary hanangana ny tsy fivadihan'ny marika. Ny fihenam-bidy dia fomba azo antoka hitaomana ny vahiny hanoratra mivantana aminao. Mitady ny vidiny tsara indrindra ny mpanjifa, ka rehefa mahita ny tranokalan'ny famandrihana mivantana toa ilay manome fihenam-bidy mahaliana azy ireo izy ireo, dia ho dodona kokoa izy ireo hamandrika trano avy aminao noho ny fialan-tsasatr'izy ireo, ny dia ataon'izy ireo na ny hijanonany any amin'ny tanàna hafa. fotoana fohy noho ny fanabeazana. Raha jerena fa azo atao fepetra amin'ny fampiasana ny kaody voucher, azonao atao ny mampiasa an'io endri-javatra io na dia any amin'ny firenena izay ampiharina amin'ny OTA aza ny fehezan-dalàna momba ny parity.
Mikarakara ny fahombiazan'ny orinasanao eto Zeevou izahay. Ka, avy amin'i mangataka demo maimaimpoana ary mampiasa ny Toetoetra afaka manatsara ny fahombiazanao ianao.